भनाइ, गराइ र वास्तविकता | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / भनाइ, गराइ र वास्तविकता
भनाइ, गराइ र वास्तविकता
Posted by: युगबोध in विचार September 14, 2018	0 148 Views
एकाबिहानै फेसबुक खो ले र हे रे को त एकजना विद्वान मित्रले ले खे को स् टाटसमा गएर आखा रो कियो  । उहाको सार थियो हाम्रो मुलुक र हामी कता जा“दै छांै  । त्यो भनाइले मलाई एक पटक हाम्रो मुलुकमा भए गरे का घटनाक्रमहरुको सिलसिलाले विगतमा जान बाध्य बनायो  ।
जतिबे ला म क्याम्पसको प्रमाणपत्र तहमा अध्ययनरत थिए“ त्यतिबे ला मात्र मलाई थाहा भयो कि दे शमा पञ्चायती व्यवस् थाबाट प्रजातान्त्रिक व्यवहार हुन सक्दै न । मानवअधिकार, स् वाधिनता, प्रे स स् वतन्त्रताजस् ता कुराहरुको उपयो ग यो व्यवस् थामा सम्भव छै न । निर्दलयीता प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्र पदैर् न, यो त तानाशाही व्यवस् था हो  । मलाई सबै कुराले छो ए छो एनन् थाहा भएन । तर मान्छे को बो ल्न पाउने अधिकार तत्कालीन अवस् थामा कुण्ठित भएको जस् तो लाग्न थाल्यो  । वि.सं. २०४६ सालमा आन्दो लन भयो दे शमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो भनियो  । ठाउ“–ठाउ“मा खुशियाली मनाइयो । नारा जुलुस निकालियो । प्रजातन्त्र जिन्दावाद भने र आवाज बुलन्द गरियो  । मानिसहरुलाई नारा जुलुसमा उतारियो , शहरमा आमसभाहरु आयो जना गरियो र भनियो कि अब हाम्रा दिन आए । दे शमा विकासले गति लिन्छ । जनताको जीवनस् तर उकासिन्छ । मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । मान्छे स् वतन्त्रतापूर्वक बा“च्न पाउ“छन् आदि आदि ।
यसरी भनिएका भनाइहरु गराइमा रुपान्तरण भए वा भएनन् त्यो विगत भयो  । यसै क्रममा चुनाव हुने भयो  । विभिन्न पार्टीका उम्मे दवारहरु जनताका घरदै लो मा पुगे र बाचा गरे कि मलाई भो ट दिनुस् म यो –यो गनेर् छु । हामीले राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले भने का कुराहरु बिर्सियौ ं । तर नतिजामा हे र्दा भनाइ र गराइमा कुनै सम्बन्ध स् थापित हुन सके न । विभिन्न राजनीतिक दलले सरकार बनाए, सरकार ढलाए, फे रि बनाए । तर भन्ने क्रम रो किएन हामी यो गछौर् ं त्यो गछौर् ं । यसले गर्न दिएन, उसले गर्न दिएन, त्यसले गर्न दिएन हामी गछौर् ं आदि आदि ।
घटनाक्रमहरु बित्दै गए । समयअनुसार मानिसको चे तनाको स् तरमा के ही सुधार आएको जस् तो भान भयो  । विकासका के ही कामहरु दे खिए । बाटो घाटो , पुल, कुला कुले साहरुको निर्माणमा के ही गति पनि दे खियो  । गाउ“हरु रित्तिने र शहरहरु भरिने क्रम बढ्न थाल्यो  । हाम्रो मौ लिक परम्परा, संस् कृति र रहनसहनमा के ही विचलन जस् तो दे खिन थाल्यो  । हामी यसै लाई प्रजातन्त्रको उपलब्धि ठाने र मख्ख पदैर् वा वामा रमाउन थाल्यौ ं । आफ्नो पन हराएर परनिर्भता बढ्दै गएको , राजनीतिक विकृतिले चरम सीमा नाघे को , सांस् कृतिक धरो हरहरु भत्किएको हामीलाई ख्याल नै भएन । सामाजिक न्याय जो प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो त्यो नै खल्बलिएको हामीलाई पत्तै भएन । हामी त खाली ने ता र तिनका आसे पासे को जीवनशै ली, व्यवहार र तिनीहरुको मिठो आश्वासनमा आशावादी बनिरह्यौ ं । के ही मान्छे हरु त हामी पनि यस् तै बन्न पाए हुन्थ्यो भनी कल्पनामा डुबुल्की मार्न थाल्यौ ं ।
यही प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै दौ रानमा वि.सं. २०५२ सालबाट एउटा राजनीतिक दलले आन्दो लनको शुरुवात ग¥यो सत्तापक्षस“ग लड्ने  । हामीलाई जसलाई परे न उसलाई थाहा नै भएन, दे शमा के भइरहे को छ भने र  । शुरु–शुरुमा सामाजिक न्याय, जनजीविका, अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा के ही आवाजहरुको सम्बो धन हुने क्रम दे खियो  । मान्छे अन्याय र अत्याचार गरे काहरु सजायका भागिदार बने पनि । के हीले अब त सुध्रिनुपर्छ है है न भने हामी पनि जनअदालतमा दो षी हुन पुग्छांै भन्ने सो च पनि बनाए । तर यो क्रम धे रै चल्न सके न । सत्ता पक्ष र आन्दो लनरत पक्षको मारमा हामी धे रै ले अनाहकमा अनावश्यक दुख, कष्ट, झमे ला, बर्बादीको सामना गर्नु प¥यो  । दे श पूरै युद्धमा हो मियो  । कै यौ ं व्यक्तिहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाए । मर्नु र मार्नु नियति झै ं बने को दे खियो  । आन्दो लन जे का लागि भने र गरिएको थियो त्यो हुने छा“ट दे खिएन । जे भनिएको थियो त्यो गरिएन । खाली आपराधिक मनो बृत्तिको आभाष हुन थाल्यो  । जसरी पनि धन जम्मा गनेर् , शासन गनेर् , ठूलो मान्छे बन्ने सँे चाइ भन्दा अरुमा खासै ध्यान गएको जस् तो दे खिएन । बे थितिलाई थितिमा, अन्यायलाई न्यायमा बदल्ने काम पटक्कै हुन सके न । खाली के ही सामजिक अगुवा भनाउ“दाहरु फे रिए, के हीको आर्थिक स् िथतिमा बदलाव आयो , मान्छे हरु अघिपछि लाग्ने क्रम फे रियो , मान्छे हरुको भीड र झुण्डहरुको रुप फे रियो  ।
बृहत् शान्ति सम्झौ ता भयो  । अब त सबै कुरा पूरा हुन्छन् । हिजो पो युद्ध थियो र हुन सके न अब हुन्छ भन्ने भनाइहरु प्रशस् तै आए । के ही नया“ र के ही पुरानै , के ही पुरानै । तर फरक रङमा समाजसे वीको रुपमा उदीयमान भएर आए । हामीमा पनि अब त के ही हो ला, विधिको शासन कायम हो ला, सामाजिक न्यायको अवस् था आउला, जनताका पक्षमा के ही सुधारका कामहरु हो लान् जस्ता आशाका मुनाहरु पलाएर आए । तर जे –जे भनियो त्यो भनाइमा मात्र सीमित भए गराइमा उत्रन सके न ।
यसरी विभिन्न कालखण्डहरु बित्दै जा“दा त झन दे शमा अराजकता मौ लाउ“दै गयो  । विधिको शासन कतै दे खिएन । नियम कानूनको धज्जी ठूला भनाउ“दाहरु र सत्तामा बस् ने हरुबाटै उडाउ“दै गइयो  । दे शको व्यवस् था प्रजातन्त्र, लो कतन्त्रबाट भीडतन्त्रमा रुपान्तरण भएको जस् तो दे खिन थाल्यो  । दिनहरु बित्दै गए । दे शमा के ही नहुनुको कारण कतै राजा त हो इन भन्ने लागे र हो ला सायद राजतन्त्रलाई पनि फालियो  । दे शमा गणतन्त्र स् थापित भयो भने र खुशियाली मनाइयो  । कुनै मापदण्ड र मान्यताबिना भागबण्डामा राजनीतिक संरचना तयार गरियो  । जनताका छो राबाटै राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको व्यवस् था पनि गरियो  । अब फे रि के ही हुन्छ हो ला भन्ने आशा पलायो  । भनाइहरु आउन थाले यो गछांैर् त्यो गछौर् ं तर बिडम्बना जे हुनुपथ्योर् त्यो हुन सके न । सुशासन कायम भएन । विधिको पालना कसै बाट पनि भएन । नियम कानून सानालाई मात्रै भयो  । पुलिस प्रशासनमा, कर्मचारीतन्त्रमा ’चे न अफ कमाण्ड’ खल्बलियो , भ्रष्टाचार, अनियमिता, कालाबजारी, महंगीले प्रश्रय पाए । गरिण्व र इमानदार जनता फे रि पनि राज्यबाट पाउने सबै खाले से वा र सुविधाबाट बञ्चित हुन बाध्य भए । खाली बे इमान, चाटुककार, बिचौ लिया, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, ने ताहरु र तिनका आसे पासे ले मात्र राज्यको से वा सुविधामा भाग लिने मौ का पाए ।
फे रि भन्ने मौ का आयो ने ताहरुलाई दे शमा संविधानसभाको चुनाव भएर जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान बने मा दे शको मुहार फे र्न सकिन्छ । यो संक्रमण काल हो संविधान निर्माणपश्चात दे शमा स् िथरता कायम हुन्छ, जनताका मनो कांक्षाहरु पूरा हुन्छन्, संविधानले जनताको सबोर् च्चताको सुनिश्चित गर्छ, सामाजिक न्याय यथार्थतामा परिणत हुन्छ आदि आदि । संविधानसभाको चुनाव भयो विदे शीले दिएको अनुदान र ऋणमा दे शले ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहो र्नुप¥यो संविधानसभाको नाममा । लामो समयसम्म राजनीतिक नाटकको नौ टंकी दे खाएर संविधानसभा पनि विघठन गरी फे रि राजनीतिक अन्यो लता ल्याइयो  । बिभिन्न अटकलबाजीहरु काटियो  । फे रि नया“ सरकार गठन गरियो र संविधानसभाको निर्वाचन फे रि भयो  । दे शले ठूलो आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुप¥यो  । सरकारले बिभिन्न दातृ निकायहरुलाई गुहार्नुप¥यो आर्थिक जो हो गर्नका लागि ।
संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात दे शको संविधान बन्यो अनि भन्न थालियो कि अब त दे शले नया“ का“चुली फे र्छ । यो हुन्छ, त्यो हुन्छ सबै भनाइमै सीमित भरहे का छन् । संविधानको कार्यान्वयनमा जो ड दिनुपर्छ । अनि मात्र नया“ ने पाल बन्छ भन्ने हौ वा चलाइयो  । खाली भन्ने एउटा गनेर् प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो  । संविधानको कार्यान्वयनका लागि भने र स् थानीय तहको निर्वाचन भयो , जनप्रतिनिधिहरु नया“ जो श र जा“गरका साथ आए । फे रि शुरु भो भन्ने हामी यो गछौर् ं त्यो गछौर् ं । प्रजातन्त्र, लो कतन्त्र, गणतन्त्र रटानको साथसाथै स् थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आफूलाई छुट्टै पात्रको रुपमा हे र्न थाले  । फे रि राजा र रै तीकै परम्परा दो हो रिएको जस् तो भान हुन थाल्यो  । कसरी स् थानिय तहलाई सुविधासम्पन्न बनाउने , कसरी तलब भत्ता बढी बनाउने , कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई स् थानीय उपभो क्ता समितिमा राख्ने र कमाउन दिने जस् ता महान कार्यहरुमा नै उनीहरुका समय व्यतित भए । यहा“ पनि भनाइ र गराइमा एकरुपता आउन सके न । वास् तविकता ज्यू का त्यू रह्यो  ।
संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा फे रि प्रदे श तह र संघीय तहको निर्बाचन सम्पन्न भयो  । जनप्रतिनिधिहरु चुनिए, मनो नित भए, समानुपातिकमा परे  । प्रदे शसभा, प्रदे श सरकार बने । साथसाथै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको गठन भयो  । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने  । सरकार गठनको प्रक्रियाले हतार हतारमा आफ्नो आकार लियो  । फे रि भनियो अब हामी यो गछौर् ं त्यो गछौर् ं । हामी पनि आशावादी भयांै , अब त बाधा के ही छै न । गणतन्त्र छ । संबिधान छ । यसै का लागि भने र दशकांै संघर्षरत राजनीतिक दलहरु छन । तिनका ने ता र कार्यकर्ता छन् । के ही हो ला, दे खिने गरी परिवर्तनका संके तहरु आउलान् । तर हाम्रो आशा आशामै रहिरहे को छ । स् थानीय तहको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बन्नुपनेर् नियम कानून बन्न सके को अवस्था छै न । कर बढाउने र आफ्नो से वा सुविधा बढाउने र आफ्ना आसे पासे हरुलाई अघिपछि लगाउने भन्दा अरु खासै उपलब्धि भएको जस्तो लाग्दै न । जनताले धे रै नै अपे क्षा पाले र राखे को अबस् थामा सबै काम नभए पनि शुरुवाती त राम्रो हुनुपनेर् मा पहिले र अहिले मा फरक अनुभूति गर्न सकिएको छै न ।
त्यही अवस् था के न्द्रीय सरकारको पनि छ । अझ बीचमा भएको प्रादे शिक सरकार के का लागि र किन भन्ने भान भएको छ । आवश्यक नियम कानूनको अभावमा काम र कर्तव्यको किटानी नै हुन नसके को अवस् था छ । के न्द्रमा भएका सारा अधिकार स् थानिय तहमा जान्छन् अझ “सिंहदरबार नै घर–घरमा” भनिएको थियो । त्यो खाली भनाइका लागि मात्रै भएको छ । अहिले सम्म भो लि हो ला कि आशा गरे र बस् नुपनेर् भएको छ । सरकार खाली बहुमत, दुई तिहाइ मतको जो डघटाउमा व्यस् त छ । दुई तिहाइको दम्भका कारणले यदि दे श र जनताका लागि के ही पनि नहुने त हो इन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थाले को छ । महंगी, नातावाद कृपावादले प्रश्रय पाएकै छ । कर्मचारीतन्त्रमा कुनै सुधार र परिवर्तनको लक्षण दे ख्न सकिएको छै न । राजनीतिका साथै कर्मचारीको अराजकता मौ लाएको छ । कर्मचारी राज्यले खटाएको ठाउ“मा गएर काम गर्न अटे र गर्छ, राज्य निरीह बन्छ । महंगी सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न राज्यपक्ष चुके को छ भन्ने आवाज गुञ्जे को छ । हिजो तथानाम भन्ने हरु आज ते ही हिजो का गतिविधि भन्दा अझ तल गिरे र काम गरिरहे को अवस् था छ । भनाइ र गराइमा कुनै तालमे ल मिले को छै न । वास् तविकताको धरातल एकातिर छ । भन्ने एउटा गरिन्छ, काम अकोर् गरिन्छ ।
यति हु“दै गर्दा पनि हामीमा र हाम्रा ने ता, कर्मचारी, राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तामा हो श न आउने हो भने दे श अझै उभो लाग्न सक्ने छा“ट दे खिदै न । तै पनि बिग्रिएर खतम भो मात्र भने र हाम्रो कर्तव्य पूरा हुन्न ।
दे शलाई विधिको शासनमा हि“डाउनुपर्छ, जनताको सवोर् च्चतालाई सदै व आत्मसात गर्नुपर्छ, सामाजिक न्यायलाई कदापि भुल्नु हु“दै न । यी त हामीले गरे र हुने हो इनन् । राज्यले गर्नुप¥यो  । तर हामीले पनि आफ्नो चरित्रलाई भनाइ गराइमा एकरुपताका साथ बनाउनुप¥यो  । सबै ले आ–आफ्नो क्षे त्रबाट नीति, नियम, कानूनको पालनामा ध्यान दिनुप¥यो  । शक्ति र पहु“चका भरमा निर्धालाई हे प्ने र बलियालाई चाकडी गनेर् हाम्रो परम्परागत संस् कारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसके को ले सो ही अनुरुपको समाजिक परम्पराको थालिनी गरौ ं र भन्ने गरिएको समुन्नत ने पाल बनाउनमा हामी पनि सहयो गी बनौ ं ।
Previous: महिला हिंसा रोक्न संसदीय छानबिनको माग
Next: अध्ययन अध्यापन अपडेटको प्रसंग